Maalinta: Diseembar 6, 2018
Dhamaadka Xuddunta Gawaarida
Dawlada Hoose ee Afyonkarahisar waxay sii wadaysaa fulinta mashaariicda aragga mid mid. Duqa magaalada Burhanettin, oo qaatay go'aan xag-jir ah si loo yareeyo cufnaanta taraafikada ee isgoysyada halbowleyaasha waaweyn, ayaa diyaariyey mashruucyo marin-biyoodka. [More ...]
Markii ugu horreysay adduunka, dhererrada mitir ee 18 dhererkooda, jalaatada, batari, koronto, 0 basaska emission-ga ah (ELBUS) ayaa wali lagu sii wadaa gaadiidka dadweynaha ee Duqa Magaalada Elazığ Duqa Magaalada Mücahit Yanılmaz 'Qorshooyinka Xalka ee Brand City Elazığ' [More ...]
Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau White
Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau oo leh dhererka sare ee 1500, kaas oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli si loo kobciyo nolosha bulshada ee dadka Denizli isla markaana ay wakhti ku bixiso deegaannada isku xidhan iyo dabeecadda [More ...]
Ingiriis Tababarka loogu talagalay darawaliinta ee Muğla
Muğla, oo ka mid ah magaalooyinka dalxiiska ee ugu muhiimsan adduunka, wuxuu bilaabay inuu siiyo barashada Ingiriisiga gaadiidka dadweynaha, taksi iyo wadayaasha gawaarida adeegga iyadoo lala kaashanayo Dowladda Hoose ee Magaalada Muğla iyo Agaasinka Gobollada ee Waxbarashada Qaranka. Muğla [More ...]
Khariidadda ugu horeysa ee 10 ayaa la soo saaray December-deedii mashruuca Kartepe Ropeway
Dawlada Hoose ee Kartepe, xaflada furitaanka ee Mashruuca Khadka Tooska ah ee Cable ayaa lagu qaban doonaa 10 maalinta Isniinta, Diseembar 2018 oo uu marti galiyay Duqa Magaalada Kartepe Hüseyin Üzülmez. 14.00 ee Kartepe ayaa riyooday sannado, waa la hadlay laakiin [More ...]
Laga soo bilaabo Madaxwaynaha Zihni Sahin ilaa Basaska Dadka Gaarka ah
Madaxweyne Zihni Şahnin, oo ay weheliyaan saraakiishii fulinta ee Ururka 'The Public Publicuseuseuseuseuseuseuse', ayaa soo gaadhsiiyay war wanaagsan oo ah 'Xaddidid iyo Qayb Ahaan Balaadh ah' wuxuuna yidhi, oor anigu dib uma helayo America, waxaan soo saarayaa xal ”. Duqa Magaalada Samsun Magaalo Weyn Zihni Şahin, gobolka [More ...]
Gaadiidka isgaadhsiinta ee Kayseri
Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri, Jeneraal Hulusi Akar Boulevard, Wadada Aşiyan Street Junction ayaa dhisi doonta buundo. Mashiinka dhererkiisu yahay mitirka 9 dhererkiisa mitir ee loo yaqaan '170 mitir' buundada oo loo dhisi doono shirkadda 8 ayaa ka qeyb gashay hindisada. Dawlada Hoose, dardar gelinta maalgashiga [More ...]
Mashruuca Dib-u-dhaqaajinta Gacanka iyo Geeddi-socodka ayaa furi doona jidka İzmir
Isaga oo ka hadlayey dood cilmiyeed ay soo qabanqaabiyeen Akademiyada Mediterranean ee degmada Izmir Metropolitan, Yusuf Ozturk, Gudoomiyaha Laanta Izmir ee Rugta Ganacsiga Izmir, ayaa cadeeyay in Izmir Port iyo Dowlada Izmir [More ...]
DHMI waxay ku dhawaaqday diyaaradaha duulimaadka, rakaabka iyo socdaalka bisha November
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), sanadka 2018 ee bisha Nofembar, ayaa lagu dhawaaqay diyaaradda diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka. Sidaas awgeed, bishii Nofeembar 2018; Gaadiidka Diyaaradaha ee tagaya iyo ka soo degaya garoonka diyaaradaha [More ...]
CHP's Sumer ayaa waydiisatay mashaariicda tareennada ee magaalada Adana
Adana Kuxigeenka CHP Sumer, TCDD'nin xisaabaadka ayaa looga hadlay kulanka guddiga SEE ee dadka ku nool xaafada Adana iyo amniga nolosha dadka iyo hantida si dhow ula xiriirta arinta tareenka iyo gaar ahaan xaafada Yeşiloba [More ...]
Guddoomiyaha Gole; "Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu ku darayaa Nolosha"
Guddoomiyaha Gaziantep Davut Gül wuxuu booqday degmooyinka Nurdağı iyo İslahiye oo ay ku jiraan barnaamijyada booqashada degmada. Gül, oo baaraya dhismaha wadada tareenka xawaaraha sare ee degmada Nurdağı, [More ...]
Gaadiidka iyo taraamadu waxay ku dhaceen Jarmalka, waxaa jira dhaawacyo badan!
Tareeno iyo gawaari ayaa ku dhacay Arbacadii (shalay) magaalada Bochum, North Rhine-Westphalia, Germany. Dadka 6 ayaa ku dhaawacmay shilka, oo ay ku jiraan dadka 11 dadka ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa daran. Si ba'an u sabab ah shil [More ...]
Xaaladda Sharciga ee Turkiga ee Istanbul ayaa lagu dhawaaqay
Xaaladda sharci ee Kanal Istanbul, oo uu Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ugu yeerayo 'mashruuc waalan', ayaa soo baxay. Ka soo horjeedda Bosphorus, oo loo yaqaan 'marin biyoodka caalamiga ah' ee Shirweynaha Montreux, Kanal Istanbul wuxuu sharci ahaan yahay 'marin biyoodka gudaha'. [More ...]
CHP's Kani Beko wuxuu uga digay AKP inay ka hadlaan weerarka
Ku-xigeenka CHP Izmir Kani Beko, DISK-howl-gabka ah ee Disk-Bu Buca oo ay soo qabanqaabisay ururka, oo ay weheliyaan shaqaalaha iyo hawl-wadeennada hawlgabnimada ayaa la kulmay munaasabad midnimo iyo midnimo. Beko wuxuu ku sheegay bayaan ku saabsan xaalada shaqada laga eryay Izmir iyo 10 bishii Diseembar [More ...]